Olee otú Hichapụ iPhone Data Tupu ere
Hichapụ iPhone Data tupu ere
Gịnị mere mkpa ehichapụkwa iPhone tupu ere
Gị iPhone dere ozi nkeonwe gị, dị ka gị nọmba ekwentị, gị na ezinụlọ gị na ekwentị nọmba, adreesị ozi-e, gị akụ, Apple ID, photos, videos, ozi ịntanetị na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-ere ya ozi nkeonwe gị, gị mgbe onye aka ekwentị gị na onye ọmụma wil ịdaba. Ọ bụrụ na ị na-ezute njirimara na-ezu ohi, n'ihi na n'aka, ị ga-atụfu ihe. Iji zere ihe ọjọọ eme gị, ị kwesịrị ị ihichapu gị iphone tupu ị na-ere ya.
Olee otú hichapụ gị iPhone data tupu ere
Ndabere gị ochie iPhone mbụ: Tupu ihichapụ gị ochie iPhone data, jide n'aka na ị na-na na kwadoo data na ị ka chọrọ ịnọgide na, n'ihi na nhichapụ ị na-aga ịrụ bụ na-adịgide adịgide. Ọ dịghị onye pụrụ naghachi ọ bụla data site na ya na ihe ọ bụla mgbake software. Naanị otú a nwere ike nzuzo gị na-echebe n'enweghị. Ị nwere ike iji iTunes ma ọ bụ iCloud nkwado ndabere na mpaghara data na gị ochie iPhone, ma ọ bụ na nyefee ya na ọhụrụ gị na ekwentị na a ụfọdụ data transfer ngwá ọrụ dị ka Wondershare TunesGo (ma ọ bụrụ na ị ka na-ahọrọ a ọhụrụ iPhone) ma ọ bụ Wondershare MobileGo for Android (ma ọ bụrụ na ekwentị gị bụ ihe Android otu).
Hichapụ data na iPhone nke na-ere: Ugbu a, ị nwere ike malite ihichapụ niile data na gị ochie iPhone. Iji hụ na ehichapụ data-apụghị natara site ọ bụla data mgbake software, i kwesịrị ịhọrọ a pụrụ ịdabere na ngwá nke nwere ike rụchaa ọrụ a n'ụzọ zuru okè ma gaghị echeta ọ bụla data site na ya onwe. E nwere ihe ole na ole iPhone data nchicha ngwa ọdịnala na ahịa, ma fọrọ nke nta ha niile nwere ike ghara ehichapụkwa data kpamkpam. Ha nwere ike na hichaa data n'okpuru ha onwe ha ndekọ. Ndị kasị ala ụzọ na-eji PC-ọgwụgwụ software. Mgbe ọ pụrụ ime ihicha ọrụ mma. Ebe a m nkwanye bụ Wondershare SafeEraser maka iOS ma ọ bụ Wondershare SafeEraser maka Mac. Nke a software nwere ike kụrie ihe niile na iPhone, na ọbụna ndị ọchịchị mgbake owuwu apụghị weghachite ihe ọ bụla na ya. Ọ bụ kpam kpam mma ma dị mfe iji.
Download na wụnye Wondershare SafeEraser na kọmputa gị. Ẹkedori ya na jikọọ na kọmputa gị na gị iPhone site na eriri USB. Mgbe ejikọrọ ịga nke ọma, ị pụrụ ịhụ gị iPohne aha na-egosi na n'elu elu aka ekpe nke usoro ihe omume
Nzọụkwụ 2 ihichapu iPhone na-ere
Na-ekpe sidebar, pịa 'ihichapu niile Data'. Nke a na nhọrọ ga ihichapu niile data, dị ka Ozi, oku History, Facetime, kọntaktị, Mail, Kalinda, Nchetara, Edeturu, Voice Memos, Safari ibe edokọbara, Photos, Videos, na ndị ọzọ na gị iPhone. N'akụkụ aka nri, ụdị 'ihichapụ' n'ịkwado nhichapụ.
Nzọụkwụ 3 Mee Your iPhone dị ka onye ọhụrụ
N'oge usoro ikpochapụ gị iPhone, biko na-gị iPhone ejikọrọ na kọmputa gị. Nwee ndidi ka usoro ihe omume rụchaa nhichapụ maka gị. Ị ga mma ghara pịa 'Kwụsị' button iji hụ na niile data na gị iPhone-ehichapu.
Ihichapụ kpam kpam Ndi ana-akpo si iPhone p
> Resource> iPhone> Olee otú iji Hichapụ iPhone Data Tupu ere